3 Qodob oo Muhiim ah oo ay tahay in laga fiirsado Marka la dooranayo Dhaqtarka Ey
Bogga ugu weynEeyaha Daryeel3 Qodob oo Muhiim ah oo ay tahay in laga fiirsado Marka la dooranayo Dhaqtarka Ey
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 18, 2022 Eeyaha Vets
Nadaafadda iyo Qalabka
Dooro goob lagu qurxin karo oo aan qurux badnayn, wasakh ahayn, leh qalabka is qurxinta oo duugoobay, ama guud ahaan aan u ekayn ammaan ama soo dhawayn.
Milkiilayaasha xayawaanku waxay leeyihiin xidhid gaar ah xoolahooda waxayna aad ugu dadaali doonaan sidii ay u ilaalin lahaayeen. Natiijo ahaan, waxaa muhiim ah in la shaqaaleysiiyo adeeg xannaanayn xayawaan ah oo xirfad leh si loo hubiyo in xayawaanka rabaayada ah iyo milkiilayaashooda ay ku raaxaystaan ​​waqtigooda.
Isqurxintu aad bay muhiim ugu tahay caafimaadka eygaaga mana aha in la iska indhatiro. Marka ay timaaddo doorashada eyga ugu fiican ee u dhaqdhaqaajiye boochkaaga, waxaa jira waxyaabo yar oo maskaxda lagu hayo.
Sii wad wax akhriska si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan inaad tahay dhaq-dhaqaaqa ugu habboon eeygaaga!
Waa inaad raadsataa goob dhaq-dhaqaale ah oo bixisa adeegyo xannaanayn xayawaanno ah oo kala duwan. Qubayska xayawaanka rabaayada ah, siinta gooyn ama timo jarista, nadiifinta dhegaha, indhaha, iyo sanka, jarista cidiyaha, iyo hubinta maqaarkooda, jaakaddooda, iyo ilkahooda dhamaantood waa xirfado uu leeyahay ninkaagu.
Wax ka weydii adeegyadooda qurxinta ee takhasuska leh, sida nadiifinta ilkaha, iyo sidoo kale haddii ay bixiyaan adeegyo dheeraad ah sida xannaano-maalmeedka doggie ama hoyga xayawaanka.
AKHRI: Intee in le'eg ayay ilmahaygu u baahan yahay maalin gudaheed?
Qubayska iyo cidi jarista, tusaale ahaan, waxa lagu bixiyaa ballan la'aan Cagaha jilicsan Isniin ilaa Sabtida.
Inta lagu jiro maydhashada, mid ka mid ah kuwa loo tababaray qubeyska ayaa siin doona eygaaga qubays nasasho leh oo leh lavender iyo shaambada guriga reexaanta, oo ay ku xigto dharbaaxo buuxda.
Tani waa qoraal muhiim u ah mulkiilaha xayawaanka rabaayada ah, kaas oo awood u yeelan doona inuu ilaaliyo xayawaankooda si fiican oo loo diyaariyey oo caafimaad qaba. Natiijo ahaan, adeegga is-qurxinta ee bixiya daawaynta dheeraadka ah waa in loo arkaa doorashada ugu fiican.
Sidoo kale, marka aad shaqaaleysiiso xannaaneeyaha xayawaanka rabaayada ah, mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee la tixgeliyo waa sida ay ugu qalmaan iyo khibradda ay u leeyihiin dhaqashada.
Waxa kale oo aad wax ka weyddiin kartaa khibradii hore ee xannaaneeyaha, gaar ahaan xayawaanka xawayaanka ah ee cabbirka xayawaankaaga, taranka, iyo dabeecadda.
Marka la dooranayo adeega is-qurxinta ee xirfadlaha ah, goobta ay ku qurxintu ka dhacayso sidoo kale waa muhiim in la tixgeliyo.
Nadaafadda xarunta ayaa muhiim ah sababtoo ah waxay ka ilaalisaa xayawaanka cudurada, shilinta, iyo dulin taas oo laga yaabo inay ku jirto deegaan wasakh ah.
Goobaha is-qurxinta ee sida wanaagsan loo dayactiray waa in la door bidaa maadaama ay muujinayaan xirfad-yaqaannimo oo ay u fududeeyaan adeegga xannaanaynta inay daryeelaan xoolaha ay daryeelayaan.
Codso in lagu soo booqdo xarunta oo go'aami in ay nadiif tahay oo si wanaagsan loo habeeyey iyo in kale. Xataa jaleecada cursory waxay sheegi kartaa faraqa u dhexeeya aagga qurxinta si wanaagsan loo ilaaliyo iyo midka aan ahayn.
Su'aasha ku saabsan qiimaha waa ta ay tahay inaad isla markiiba waydiiso si aad uga fogaato shoog kasta oo dhejis ah. Qiimaha eygu wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran xajmiga eyga iyo nooca jaakada uu leeyahay, iyo sidoo kale adeegyada ku jira dhaqidda caadiga ah ama arooska.
AKHRI: 5 Xaqiiqo oo Muhiim ah oo ay tahay inaad tixgeliso ka hor intaadan iibsan Puppy Maltipoo
Qurxinta eeyaha qaarkood waxay qaadataa waqti ka badan sidii loo hagaajin lahaa kuwa kale. Kadib qiimaynta baahiyaha gaarka ah ee eygaaga, daryeele xirfad leh ayaa awoodi doona inuu ku siiyo qiimo.
Had iyo jeer waa wax cajiib ah in la helo qiimo wanaagsan, laakiin qaali ma aha had iyo jeer khatarta. Doorashada eyga dhaq-dhaqaaqa ayaa muhiim u ah dheellitirka saxda ah.
Waxaad rabtaa qiimaha ugu weyn ee suurtogalka ah adiga oo aan u hurin tayada. Sababtoo ah isqurxintu aad bay muhiim ugu tahay caafimaadka eygaaga, waa fikrad wanaagsan inaad wax yar bixiso si loo hubiyo in xayawaankaagu uu helo daryeelka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah!
Si joogto ah u xannaanaynta xayawaankaaga waxay kaa caawinaysaa inaad hore u ogaatid cudurro kasta oo hoose, taas oo macnaheedu yahay in si dhakhso ah oo waxtar leh loo daweyn karo, oo ay u dhowdahay inay saameyn muddo dheer ah ku yeeshaan xayawaankaaga.
Tababarka eygaaga inuu ku raaxaysto habka isqurxintu waa arrin muhim ah oo koritaankooda ah waxayna ka faa'iidaysan doonaan markay sii weynaadaan. Tani waxay si gaar ah run u tahay hawlaha u baahan inay weli joogaan, sida cidi jarista iyo nadiifinta dhegta.
Si looga caawiyo inay la qabsadaan dhaqanka, taranta wanaagsan ayaa ubadkooda u qurxin doona isla marka ay u bislaadaan ku filan.
Haddii ay dhacdo in aad shaqaaleysiiso khabiir ku takhasusay xayawaanka, waxaa jira dhaqammo badan oo joogto ah oo aad ku samayn karto xayawaankaaga guriga si aad u sii qotomiso xidhiidhkaaga. Inkasta oo dadka qaarkiis ay doortaan inay is-qurxiyaan xayawaankooda, xirfadle karti leh kaliya kama dhigi karo eygaaga mid aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale wuxuu ka caawin karaa dayactirkiisa ama iyada, sida ciddi jarista, nadiifinta dhegta, iyo nadiifinta ilkaha.
AKHRI: Dhibaatooyinka Dhaqangelinta Caadiga ah & Sida Looga Dhigo Kulanka Mid Wanaagsan
Marka laga soo tago in dhammaan arrimahan ay hortaada joogaan, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku tiirsanaato maskaxdaada si aad go'aan u gaadho.
Haddii adiga iyo eygaaga labadiinuba aad si fudud u hesheen, markaa waxaad heshay ciyaar guur-doon ah oo cajiib ah. U fiirso dhammaan fursadaha mustaqbalka ee arooska si aad u hubiso inaadan illoobin shay muhiim ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan…
Views Views: 2,251
talooyinka dhaqidda eyda
muhiimadda ay leedahay dhaqidda eyda
muhiimadda ay leedahay is-qurxintu
muhiimadda ay leedahay xannaanaynta xayawaanka
article PreviousSida Loo Doorto Inta u dhaxaysa Korsashada iyo Iibsashada Ey
Next articleSida Loogu Helo Xayawaanka Xoolaha Ugu Wanaagsan
Isku darka Shepherd Corman - 10 shay oo aad u baahan tahay inaad ogaato
7 Sababood oo lagu Tixgelinayo Hoyga Kennel-ka Markaad Fasaxa aaddo
Sidee Looga Iibsadaa Alaabooyinka CBD Tayada Ugu Fiican Eeyada?
Suuqa Caymiska Xayawaanka ee Mareykanka ayaa lagu xoojiyay Caymiska Xayawaanka
Sida Loo Qorsheeyo Gudbinta Eeygaaga - 5 Waxyood oo aad Ogtahay